Kutheni KingHow - Xiamen Kinghow yangaphandle Product Co., Ltd.
UKingHow ungumenzi wazo zonke iibhegi zangaphandle, umthambo wezemidlalo, uhambo kunye nendlela yokuphila. Iimveliso zethu eziphambili zibandakanya iiBaseball Equipment Bags, Fishing Tackle Bag, Hunting Bags, Shooting Bags, Ice Hockey Bags, Camping Bags, Sports Bags, Daily Backpack, Laptop Bags, Golf Bags, Baseball Gloves and so on.We have a long history as a Umthengisi weebhegi kunye nemithwalo yabathengi behlabathi liphela. Sinikezela uluhlu olupheleleyo lweenkonzo zombini imibuzo yakho ye-OEM kunye ne-ODM ngamaxabiso efektri okhuphisanayo.
Ukungafihlisi kunye nokunyaniseka
Ukwakha ukuthembela into ekufuneka siyenzile kukungafihlisi ngokupheleleyo kuwe. Iqela lethu liyafumaneka ukuze likunike zonke iinkcukacha zolwazi ofuna ukuzazi ngathi, malunga nenkqubo yethu okanye iinkcukacha zokubalelwa kwexabiso lakho.
Imodeli yethu yeshishini luxanduva kunye nokusebenza. Siyaqonda ukuba bangakanani umngcipheko abathatha abathengi ngelixa besenza nabenzi beengxowa zaseTshayina. Iifektri kufuneka ziqale ziqinisekise umgangatho kunye nexabiso elifanelekileyo.
Iingxowa zethu zingathobela yonke imigangatho yamazwe aphesheya njenge-TOV, CSCV, SGS, TUV, ITS, REACH njl.
Ngamava ethu atyebileyo, sinokucebisa amalaphu, izinto ezincedisayo okanye enye indlela yoyilo yokwandisa ixabiso lokuhlangabezana nokujolisa kwiprojekthi yebhegi. Siza kuhlala sikhumbula ubuncinci bemfuno esemgangathweni kuphando nakwisisombululo sethu.
Imveliso yethu eguqukayo kunye nenkqubo yolawulo iya kuqinisekisa ubulunga kunye nobungakanani, sibonelela ngexesha elikhawulezayo lokuhambisa kushishino kuzo zonke iimbombo zehlabathi. Ngokwesiqhelo ixesha lethu eliphambili liya kuba ziintsuku ezingama-35-40.
Ukufikeleleka, ukuphendula ngokukhawuleza ii-imeyile kunye nemibuzo, ukukunceda ekudalweni kwemveliso yakho kunye nokufumana izisombululo, ezi zezinye zezimvo ezenziwa nguKingHow zokuzisa abathengi bethu ukoneliseka okuphezulu.
Thetha kunye noTshintshiselwano
Xa umthengi eqala ukukholelwa ukuba sizinikele ngokwenene kulwaneliseko lwabo, sinokuqala ngokutshintshiselana kwaye sithethe nzulu kulindelo lomthengi. Iqela lethu liyafumaneka ukukunika iingcebiso kunye nesisombululo.